Ipa yazvino kubata kune yako Apple Watch neiyi tambo | Ndinobva mac
Ipa yazvino kubata kune yako Apple Watch netambo iyi
Iyo Survival Straps kambani yakaparura nyowani tambo yemhando yeApple Watch iyo yakanyatsosiyana, maererano nedesheni, kubva pane zvatakajaira kuona. Mune ino kesi, tambo ine zvese zvakasiyana zvakasiyana dhizaini uye kuvhara, zvinoreva kuti kana iwe ukatenga iyo kune yako Apple Watch, ndeyekuipa iyo yakataridzika kutarisa.
Sezvauri kuona mumifananidzo iyo yatinobatanidza, kuvhara kwe Iyi tambo inoteedzera mhando yekabhini iyo inoipa iyo yakasimba asi yakasarudzika kutaridzika.
Iyo tambo yatinokuratidza iwe inowanikwa kune ese ari maviri makumi matatu nesere uye makumi mana ematanho zviyero, uchive saka inoenderana neApple Watch Series 1 uye Series 2. Iwo maadapter ekubatanidza etambo kuApple Watch akafanana neaya atinogona kuwana mune mamwe mamodheru. Aya maadapter anogona kusarudzwa mune yakajeka simbi kana nhema, zvinoenderana neshinda dhizaini iwe yaunoda kutenga.
Kana iri tambo yacho pachayo, unogona kuona pawebhu kuti isu tinobatanidza kwauri kuti yakagadzirwa neshinda yakakoswa uye kuti kana uchikwanisa kutenga yako uchafanirwa kuyera mutsetse wechiuno chako kuti tambo yacho ikwane zvakakwana. . Pawebhu iwe unogona kuona kuti pane zvisingaperi mikana yeiyi mhando tambo, yakagadzirwa muAmerica uye inowanikwa mune anopfuura makumi mana mavara nematoni maviri. Zvirokwazvo Icho chiitiko chitsva chekuti iwe unogona kufunga nezvacho kana uchitenga tambo yeApple Watch yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ipa yazvino kubata kune yako Apple Watch netambo iyi
Tichava nedzimwe dhata kubva kuApple Park muna Chikumi 5?